Ukunqoba kunika ukuzithemba ngaphambi kwehlobo elikhulu – u-Du Plessis
Ukapteni wama-Standard Bank Proteas, u-Faf du Plessis, uthi ukunqoba i-Sunfoil Test series ngo-2-0 bedlala ne-Bangladesh kufike ngesikhathi esihle ngaphambi kwehlobo elinzima okubalwa khona ukufika kwe-India ne-Australia. Ama-Proteas adlale kahle kuyona yombili imidlalo – ngokunqoba nge-innings – ikakhulukazi indima edlalwe abashayayo, babusa kwisimo esithule.
u-Du Plessis uyavuma ukuthi iqembu aliqedile, njengoba abadlali ababalulekile abaphosayo belimele futhi kusabhekwa iqembu elinqobayo kubashayayo njengoba kukhona izinto ezibuyiselana emuva. Ukunqoba yinto yokuqala ngaphambi kwama-Test ayisikhombisa, okuzohlola iqembu njengoba bebheke u-No.1 kwi-ICC Test rankings.
“Okokuqala ukuzithemba,” ekhuluma ngokuhle okuphume kwi-series e-Bloemfontein ngeSonto. “Sahlela kahle singena kule-series ngokuthi sifuna ukunqobani njengeqembu; hayi njengabashayayo kuphela, futhi sikunqobile lokho. Ukuzithemba kule-series ngaphambi kwama-series amabili amakhulu ngasekupheleni konyaka, siyakujabulela lokho.”
“Kule-series akukho ebesingakwenza kangcono,” kusho u-Du Plessis. “Wonke umuntu uthole ama-runs, bekunamakhulu amakhulu, namakhulu amaningi, kanye nama-partnerships abablulekile. Asiphelele, siyazi ukuthi siyiqembu eliding ukwenza kangcono. Uma sibangcono, sizoqhudelanela ukuba u-No.1.”
u-Du Plessis uthi ebelindele ‘ukulwa okukhulu’ kwiqembu lase-Bangladesh elingu-No.9, elifike kwi-series emuva kokulingana ngo-1-1 ne-Australia ekhala. Njengoba ukunqoba kuzojatshulelwa, ukapteni uzobheka phambili ekubeni neqembu eliphelele abazokhetha kulona kwizimpi ezizobakhona uma kuyophela unyaka.
“Bengilindele ukulwa okukhulu,” esho evuma. “Bengingalindele ukuthi bazonqoba i-series, kodwa bengilindele ama-sessions anzima lapho ebesizodinga ukuthi simunce incindezi ngoba banamakhono eqenjini labo. Ngalokho, kumelel usho ukuthi iqembu lethu lenzekahle.Ngesikhathi bezama ukufaka incindezi kithina, saphendula kahle ngenkani ngendlela esakhuluma ngayo kumhlangano weqembu. Ama-overs amahlanu nomaayisithupha emuva kwalokho besibuyelile ekubuseni emdlalweni.”
“Kuzobanzima ukubhekana ne-India ne-Australia,” kusho u-Du Plessis. “i-Bangladesh ayibanga nokuhlasela ebesicabanga ukuthi uzobanakho kulesimo. Asicabangi ukuthi sesiphele umasinjena. Usamningi umsebenzi okusamele siwenze futhi sibe iqembu esifuna ukuba yilona.”
Ukugxila sekudlulela emidlalweni emithathu e-Momentum One-Day International (ODI) series ezoqala e-Diamond Oval e-Kimberley ngeSonto. Iqembu lama-ODI lizohlangana e-Kimberley ngoLwesine futhi iminingwane yokuqeqesha kanye nezintatheli izomenyezelwa maduzane.
i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokunqoba i-Test series bedlala ne-Bangladesh Abadlali abadala badlala indima ekubuseni kwama-Proteas Sifuna omunye umdlalo ophezulu – u-Du Plessis u-Paterson ungenela u-Morkel olimele u-Rabada uhola ama-Proteas ekunqobeni ngama-runs angu-333 Kudingeka sibambisane ukuze sinqobe - u-Bavuma Nganelisekile ngo-97 - u-Markram u-Markram uqale kahle njengoba ama-Proteas efaka ama-runs Ama-Proteas abhekana nomsebenzi wokuqala ngaphambi kwe-season ematasa ekhaya Ama-Proteas afuna ukunqoba ama-Test – Rabada i-Faf du Plessis uzohola ama-Proteas kuma-format amathathu